Visa si Single-Banye-on ndenye ọpụpụ! | Martech Zone
Signbanye nbanye otu egosila na ọ ga - arụ ọrụ gafee osisi - ma jiri ntinye aka mmadụ iji mezue mpempe akwụkwọ, ma ọ bụ ugbu a site na iji teknụzụ ịkwụ ụgwọ iji tọghata onye ahịa ngwa ngwa. Visa na-enye otu akara ngosi na sistemụ akpọrọ Ebe ọpụpụ Visa nke nwere otutu nkuchi.
Site na uto ngwa ngwa na ọnwa 10 gara aga, Visa Checkout ahụla nnabata dị ukwuu na ọnụego mkparịta ụka. Ha ga-ebido ụfọdụ nnukwu azụmaahịa na mgbasa ozi mgbasa ozi n'oge ọkọchị a. Ruo ugbu a, ọ bụ ezie na ha emeela mkpọtụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Nde ahịa nde 4
Ihe kariri 125,000 ndi ahia na ndi obere
Ndị mmekọ ụlọ ọrụ 260
Na nyocha comScore na nso nso a (lee anya n'okpuru), ekpughere na ndị ahịa Visa Checkout ahụla ihe nkezi nke 69% mgbanwe ntụgharị maka ndị ọrụ dị ugbu a na-eme a zụọ. Nke a bụ 66% dị elu karịa ọnụego ntụgharị a na-akọ na ndenye ọpụpụ ọdịnala ọdịnala
Onu ogugu nke enyere na Visa Checkout bu 7% nke di elu karia iwu enyere na ntaneti na ebe njem ya na ugwo ndi ozo. Nkwupụta dị iche nke Millward Brown chọpụtara na pasent 95% nke ndị ahịa Visa Checkout kwuru debanye aha dị mfe na 96% kwuru na ha nwee mmetụta nke ịnọ ná ntụkwasị obi eji ya.
Visa ga-emekwa nnukwu ihe ngosi mgbasa ozi na mgbasa ozi iji kpochapụ oge ọkọchị.
Tags: ịkwụ ụgwọ n'ịntanetịugwo nhaziotu akaravisandenye ọpụpụ visa